Ịzụta eriri nke Canrenone (976-71-6) HPLC≥98% | AASraw
Canneone ntụ ntụ (976-71-6)
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Canrenone ntụ ntụ (976-71-6)
Rating: SKU: 976-71-6. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Canrenone ntụ (976-71-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Canrenone ntụ ntụ e nyere ya na 2 × 82 mg na 2 × 164 mg kwa ụbọchị na oge 10 maka ndị ọrịa mamịrị na-enweghị ọrịa obi, imeju ma ọ bụ akụrụ. Awardostrosterone excretion na plasma aldosterone mụbara ntakịrị n'oge ọchịchị abụọ ahụ.
Canrenone ntụ ntụ video
Canrenone ntụ ntụ isi agwa
aha: Canrenone ntụ ntụ
Usoro Molecular: C18H20O2
Molekụla arọ: 258.36
agba: White ma ọ bụ ìhè odo Crystalline ntụ ntụ
Canrenone ntụ ntụ
COMMON BRAND (S): Canrenone ntụ ntụ
Aha aha (S): Contaren, Luvion, Phanurane, Spiroletan
Canrenone ntụ ntụ Usage
Plasma etoju nke Canrenone ntụ ntụ na 'ngụkọta metabolites' mgbe isi hydrolysis na-atụnyere ndị na-eto eto na ndị agadi na-eso otu na ọtụtụ doses nke spironolactone. Mgbe mbido mbụ na Day 1, ọkwa plasma nke Canrenone raw ntụ ntụ na 'ngụkọta metabolites' dị elu karịa ndị na-eto eto karịa ndị agadi, a chọpụtakwara esemokwu dị iche n'etiti afọ abụọ dị na AUC maka Canrenone ntụ ntụ na 'ngụkọta metabolites '. Otú ọ dị, ọdịiche ndị a dị n'agbata afọ abụọ ahụ dị obere mgbe ọtụtụ dosing gasịrị na Day 8, na ọkwa ọkwa plasma na-adịgide adịgide nke Canrenone raw ntụ ntụ na 'ngụkọta metabolites' dị elu nke ukwuu na ndị agadi. Nchịkọta nke Canrenone ntụ ntụ na 'ngụkọta metabolites' dị elu karịa ndị agadi karịa nke ndị na-eto eto. Ma Canrenone raw ntụ ntụ na canrenoic acid jikọtara ya na protein plasma, ma ọ nweghị ọdịiche dị n'etiti ndị ọgbọ abụọ dị na njikọta protein. Esemokwu dị iche iche dị na ọkwa plasma mgbe otu na ọtụtụ dosing n'etiti isiokwu ndị na-eto eto na ndị agadi nwere ike ịbụ nsonaazụ nke ọtụtụ ihe dịka ngbanwe dị na metabolism na afọ; nsogbu ịmịnye ọnụ nke ogige nne na nna; na / ma ọ bụ gbanwere olu nke nkesa ọgwụ.
Kedu ihe nyocha nke Canrenone ntụ ntụ
Dị ka ọ dị, n'ọtụtụ ọnọdụ, 50-200 mg kwa ụbọchị dị ka otu mkpụrụ ma ọ bụ na ọtụtụ nchịkwa zuru ezu.
N'ọnọdụ kachasị njọ, a pụrụ ịmalite usoro ọgwụgwọ mbụ na 300 mg ma ọ bụ karịa, mgbe ahụ, ọgwụ ahụ gbanwere iji mee ihe nzaghachi ahụ na ụlọ ọrụ nyocha.
Kedu ka ntụ ntụ Canrenone si arụ ọrụ
A rụrụ usoro HPLC nke usoro spectrometric na TQ4 Quantum Discovery ugboro atọ quadrupole uka spectrometer na usoro Aria CTC HPLC system automampler. N'okpuru ion ion electraspray dị mma, a chọpụtara ọkọlọtọ bụ isi bụ ion ion (M + H) + m / z 341 maka Canrenone ntụ ntụ. A na-eji Alfaxalone (ion m / z 333; 1 μg) dị ka ọkọlọtọ n'ime. N'okpuru mmechi nkwekorita, nnukwu ions ndị bụ isi bụ m / z 107.1 na 91.1 maka Canrenone raw powder na m / z 297.3 na 315.3 maka alfaxalone. A na-eji ions ndị na-emepụta ihe dị ka quantification na ions ndị na-eru eru iji gbakwụnye nkọwa doro anya na nhazi ahụ. Nkeji nke kachasị nke ndị steroid na-eji ammonium acetate (5 mM) / methanol na (60: 40, 0.3 ml / min) na kọlụm C18 T3 Atlantis HPLC (3 μm; 100 × 2.1 mm) na 25 ° C. A na-etolite gradient nke si na 40 gaa 90% methanol, yana oge zuru ezu nke 8 nkeji.
A na-eme nkwado nke ọnụọgụ ihe dị iche iche site na iji eriri afọ isii na nke na-atụgharị uche. Mmeghachi ihe na-enye afọ ojuju nke Canrenone ntụ ntụ na alfaxalone (106.2%) (XDD 9.5%) na 102.2% (RSD) 4.7%) na-enweta na ntinye mmiri-mmiri nke nanị 25 μl plasma na ethyl acetate (1: 10). Ọnụ ọgụgụ nke nchọpụta bụ 5 ng / ml na njedebe nke njedebe bụ 15 ng / ml. Ihe ntụgharị bụ linear (r = 0.9936) n'elu ọtụtụ nrịta (5 ng / ml na 5 μg / ml). Ihe nyocha ahụ gosipụtara maka nchịkọta nke Canrenone raw ntụ ntụ na ìgwè ndị ọrịa bụ ndị natara ọgwụ 400 mg, bụ ndị a chọpụtara na ha nọ na plasma dị na 5-45 μmol / l.
Uru nke Canrenone ntụ ntụ
Canrenone ntụ ntụ bụ isi ọrụ metabolite nke spironolactone. Site n'usoro ihe eji eme ihe, o na-eme ihe n'atumatu na aldosterone site na iwepu ya site na ebe ndi natagharia di n'ogo nke nkpu akwara na nke nkpuchi achikota; nke a na - ebute mmụba na diuresis na natriuresis na nbelata na kaliuresis. E jiri ya tụnyere spironolactone nwere uru nke oge nkwụsị ala. Dịka spironolactone, Otú ọ dị, o nweghị ihe ọ bụla na-achịkwa ma ọ bụ n'ime ihe ndị na-emekarị ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma nke aldosterone dị ala.
Mgbe nchịkwa ọnụ, Canrenone raw ntụ ntụ na-etinye uche ngwa ngwa, na-eru ihe kachasị elu plasma n'ime awa abụọ mbụ. Ọkara ndụ bụ ihe dị ka 18 awa na, n'adịghị ka spironolactone, na-agbanweghị agbanwe agbanwe, n'ime 72 awa, na mmamịrị na uzo na nha nhata.
A na-egosi na ntụpọ nke canrenone na-egosi na ọ na-eme ka mmiri na sodium na kaleuria na-amụba. Ọ bara uru n'ịgwọ ascites na cirrhosis nke imeju, ọ bụrụgodị na a na-emezi usoro ọgwụgwọ ahụ maka nzaghachi ọ bụla.
Canrenone raw ntụ ọka Marketing
Canrenone ntụcha ntụ ntụ
Canrenone raw ntụ ntụ bụ metabolite na-arụsi ọrụ ike nke spironolactone, canrenoic acid, na potassium canrenoate, a na-ewere ya na ọ bụ otu ihe kpatara nsogbu ha. A chọtara akaụntụ maka 10 na 25% nke mmetụta ntanetị nke spironolactone, ebe onye ọzọ metabolite, 7a-thiomethylspironolactone (7A-TMS), na-agbanye gburugburu 80% nke mmetụta ntanetị nke ọgwụ ahụ.
A na-ekwupụtakwa na a na-ekwu na a na-eme ka eriri na-emepụta ihe dị ka antimineralocorticoid metụtara spironolactone, ma ọ bụ nke na-adịghị ike ma dị irè dịka antiandrogen. N'otu aka ahụ na spironolactone, Canrenone raw ntụ ntụ na-egbochi enzymes steroidogenic dịka 11β-hydroxylase, erzyme cleavage nke dị na cholesterol, 17a-hydroxylase, 17,20 lyase, na 21-hydroxylase, mana ọzọ, enweghi ike ime otú ahụ.
Esi zụta Canrenone ntụ ntụ si AASraw